सेवाग्राहीले बैंक खाता नखोल्दा भत्ता वितरणमा समस्या – BikashNews
सेवाग्राहीले बैंक खाता नखोल्दा भत्ता वितरणमा समस्या
२०७७ पुष २७ गते १३:०७ विकासन्युज
सिमकोट । हुम्लाका सातवटै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता हालसम्म वितरण गर्न सकेका छैनन् । हरेक आवको मङ्सिरमा पहिलो चौमासिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रही आएको छ । दोस्रो चौमासिक रकम भुक्तानी गर्ने समयमा पनि भत्ता वितरण नभएपछि यहाँका नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
चालुआवमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम निकासा नदिँदा वितरण हुन नसकेको बताइएको छ । ताँजाकोट गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष अजमल बुढाले भत्ता वितरणमा किन ढिलाई भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सोही गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद ढकालले आफ्नो गाउँपालिमा ५४ लाख मात्र आएको र कोलेनिकाले नै निकासा नदिँदा वितरण गर्न नसकिएको बताए । कोलेनिका हुम्लाका पूर्व प्रमुख नरेशराज भट्टले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जिल्लाभरी रकम कम पठाएको, चालुआवमा बैंक खातामार्फत सेवाग्राहीलाई रकम वितरण गर्ने परिपत्र भएको र अहिलेसम्म खाताको विवरण नआएकाले रोकिएको जानकारी दिए ।
यस्तै सिमकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर पाँच र छ मा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । पहिलो र दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी फागुनमा एकैपटक वितरण गरिने वडा २ का वडाध्यक्ष नरबहादुर भण्डारीले बताए । अधिकांश सेवाग्राहीले बैंकमा खाता सञ्चालन गरेका छैनन् । पहिला घरघरमा पुगेर हात हातमै पाएका नागरिकले यस पटक बैंकमामार्फत वितरण गरिने भएपछि झन्झटिलो भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
चालुआवमा बालबालिका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आ-आफ्नो भत्ता लिनका लागि अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हरेक गाउँपालिकाले पटकपटक खाता सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशित गरे तापनि सेवाग्राहीले भने यसप्रति ध्यान दिएका छैनन् आफ्नो भत्ता नआएकोप्रति गुनासो मात्र गर्दै आएका छन् । रासस
आज दिनभरः नेप्सेको रफ्तार रोकिएन, सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन
सबै योजना मन्त्रीज्यूको खल्तीमा जाँदा गाउँपालिकामा समस्या भयोः अध्यक्ष मगर
भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न अध्यक्ष गाेल्छाकाे माग
‘सानिमा लार्ज क्याप फण्ड’ मा ४.५ गुणा बढी आवेदन, हालसम्म कतिले गरे लगानी ?
नेप्सेले एनसीसी बैंकलाई सोध्योः कम्पनीकाे सेयर मूल्य एक्कासी किन बढ्याे ?
कृषिमा एकद्वार प्रणाली
एनसीसी बैंकमा विनोद चौधरीको प्रवेश, बुक क्लोजअघि ३५ करोड लगानी
चौतर्फी विरोधपछि डण्डीको मूल्य घट्याे, अन्य निर्माण सामग्रीकाे मूल्य कहिले घट्छ ?
खुल्दै एनसीसी बैंकको पर्दाभित्रको ‘होमवर्क’, नबिलसँग मर्ज भए कति हाेला स्वाप रेसियो ?
चार वर्षमा एक खर्बकाे बैंक बनाउँछाैं; विकासकर्ता र लगानीकर्ता सबैले लाभ पाउँछन्- रामकृष्ण खतिवडा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निकाल्याे लोडसेडिङ तालिका (सूचनासहित)